Iwe unofanira kuisa mari riini pamusika wemari? | Ehupfumi Zvemari
Kutenga nekutengesa masheya ndiyo imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekuita mari kana kuisa mari yekuchengetedza. Asi nekungwarira kukuru nekuti kana zvinhu zvikatadza kuenda iwe unogona zvakare kusiya akawanda ma euro munzira. Mupfungwa iyi, chinhu chakasiyana kwazvo ndeyekudyara munguva pfupi kupfuura munguva refu. Nekuti kuburikidza neyekutanga zvichave zvakakosha kusimudzira upfumi pane a kukwidza pamutengo wakasarudzwa. Asi izvo pakupedzisira zvichaenderana nezvimwe zvinhu zvinogona kunge zvisingafanoonekwi. Nemhedzisiro yakaipa kwazvo pachirevo chako chemari.
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chete chaunofanirwa kufunga nezvacho mukudyara kwenguva pfupi uye kuti hauzove nesarudzo kunze kwekunge uri kucherechedza kushanduka kwemitengo. Zvekuti chero nguva iwe uri muchinzvimbo chekugadzirisa izvo zvinzvimbo kana, zvinopesana, kana zvakakodzera mamiriro akasangana, wedzera nzvimbo. Chimwe chinhu chaunofanira kufunga nezvacho kudiwa kwemari yauchazoda mumwedzi inotevera kana makore. Nekuti zvinoenderana neaya akakosha parameter, iwe uchazviwana iwe uchibatanidzwa mune imwe kana imwe nzira yekudyara.
Kune rimwe divi, marefu-marefu ekudyara mari akasiyana maererano nesisitimu iwe yaunoshandisa kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire. Hazvishamise kuti chikamu chakanaka chevanoongorora zvemari vanonongedzera kuchokwadi chekuti munguva dzino dzakareba iwe unogara uchiwana mari inowanikwa mumabasa emusika wemasheya. Nekudaro, pane zvimwe zviitiko zvinopesana nepfungwa iyi uye panogona kunge paine kufamba kwemakambani kunokanganisa tarisiro yako mumisika yemari. Kana kunyangwe kubhuroka kwekambani yakanyorwa pachayo, sezvakaitika mumakore achangopfuura neLa Seda de Barcelona kana Terra, kungodoma mienzaniso mishoma.
1 Marii yaunofanirwa kuisa mari?
2 Iva panguva yakakodzera
3 Zvigadzirwa zvekudyara mazviri
4 Iva nemari yekuzvidzivirira
5 Kunyanyisa kusagadzikana mumisika
Marii yaunofanirwa kuisa mari?
Ehezve, mubvunzo wekutanga waunofanirwa kuzvibvunza kubva ikozvino zvichienda ndeyekuti ndeipi inofanira kunge iri rutsigiro rwemari iyo iwe yaunofanirwa kupa kune aya mashandiro pamusika wemasheya. Zvakanaka, mupfungwa iyi hapana mitemo yakatarwa yakakosha. Asi zvinoenderana nezvose pamusoro penzvimbo yemari yawakaunganidza kusvika zvino. Kubva pane iyi hunhu, haufanire kumboisa mari iyi yese. Asi chakangwara chikamu chayo uye chero zvazviri iwe unofanirwa kugara uine imwe mari mune yako mari account. Kuti nenzira iyi, iwe ugone kupindura kumubhadharo waunofanira kutarisana nawo mumwedzi iri kuuya: yekubhadhara chikwereti, chikoro chevana, zvikwereti zvakawanikwa uye chero chimwe chingamuka chero nguva.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti zvakakosha kuti usiyanise mari yako pane zvimwe zvekufunga. Sezvinei, haufanire kuchengeta mari mudengu rimwe chete, chero zvingave izvi: nguva yekuisa, kutenga uye kutengesa kwemasheya kana mari yekudyara. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti unogona kurasikirwa nechakanaka chikamu chesevha kana zvinhu zvikasaenda sezvaunotarisira. Mari yacho inofanirwa kugoverwa pakati pezvigadzirwa zvemari zvinoverengeka, asi zvinowirirana. Ehe, iwe haugone kuita kutora kontrakiti mumusika wemasheya nemari yekudyara zvichibva pamari inoshanduka. Nekuti pakupera kwezuva iwe unenge uchiisa mari mune ingangoita mari yemari. Pachave pasina mutsauko mumaitiro aunoshandisa.
Iva panguva yakakodzera
Imwe yekiyi ku Itai kuti vabatsirwe Uine budiriro yakanyanya mukudyara mari ichave iri panguva kwayo, chimwe chinhu chisiri nyore kuwana pazviitiko zvese. Nezve misika yemasheya, zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuve wakamira mumatanho ekumusoro nguva dzese. Kwete zvisina maturo, iwe unenge uine ese mavhoti ekuti uwane rupo rwemari kuwana mukati memakore mashoma ekuita basa. Kunyangwe iri nyore kwazvo kuti iwe ugone pinda misika yemari pakutanga kwekufamba uku. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti iwe unenge uine mukana wakakura wekudzokorodza kupfuura wepakati nepakati pekupedzisira maitiro aya mukuumbwa kwemitengo. Izvo zvakaringana kuona kuti nyika dzepasi rose dzave kutenderera kwemakore mashanu uye ikozvino inogona kunge isiri iyo yakanakisa yenguva yekuwana yakakwira kudzoka pane kudyara mumusika wemasheya.
Uyezve, iwe unogona zvakare tora mukana wenguva dzakati dzegore kugutsa zvido zvako zvekudyara. Nekuti ivo vanowanzo kuve nekukudziridza mafambiro ekuwedzera kupfuura vamwe. Mumwe weiyi mienzaniso wakashongedzwa mumwedzi yekupedzisira yegore sezvo mavari mafambiro ekumusoro ari nyore kusimudzira, sezvinoonekwa mumisika yemari mukati memakumi emakore apfuura. Inguva iyo iwe yausingakwanise kupotsa kuita iyo kuchengetedza kunobatsira munguva ipfupi. Hazvishamisi kuti iwo mafambiro akavimbika uye ayo asingawanzo kutyorwa kune chero imwe mamiriro.
Zvigadzirwa zvekudyara mazviri
Kune imwezve pfungwa yekukoshesa uye ndiyo iyo inoreva zvigadzirwa zvemari kwaunofanirwa kuisa mari yekuchengetedza. Uku kusiyanisa mukudyara kunoenderana zvakanyanya ne profile yaunopa semudhara mudiki nepakati. Izvi mukuita zvinoreva kuti kana iwe uri anochengetedza mari kana anodzivirira investor, iwe haufanire kuve nehupamhi hwakawanda kuratidzwa kune equity zvigadzirwa. Kunyangwe kana iwe uine hasha, hapana mubvunzo kuti iwe unofanirwa kuisa mari mukutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya uye pamwe kunyange fomati ine njodzi yakawanda. Semuenzaniso, zvigadzirwa, mvumo kana kudyara muzvinhu zvakagadzirwa.
Pane zvinopesana, mune zvese zviitiko zvichave zvinonyanya kubatsira kuti iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitengesa. Kuburikidza ne Chokwadi yakaenzana portfolio yekuchengetedzeka uye zvigadzirwa zvemari uye kuti iwe unogona kuchengetedza kuchengetedza kupfuura zvimwe zvese. Nekuti chaizvo iyi yekupedzisira hunhu haifanire kunge ichishayikwa mune chero nzira yekudyara yakakosha munyu wayo. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Hazvishamisi kuti inofanirwa kuve chimwe chezvinangwa zvako zvekutanga pane ese mashandiro, kungave kuri mumisika yakatarwa kana inoshanduka yemari.
Iva nemari yekuzvidzivirira
Kana iwe uchida kuita mari yakanaka, chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuita kuchengetedza yako mari kupfuura zvimwe zvese. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kutsaura yakanaka chikamu chemari yako kune zvigadzirwa zvinokupa iwe yakatarwa uye yakavimbiswa purofiti gore rega. Iri zano rinogona kugadzirwa mune zvese zvakagadziriswa mari uye zvigadzirwa zvemari zvakasiyana. Pakati pekutanga pane nguva yekuisa mari, kunyangwe panguva ino iri pasi pechikwereti chakaderera kwazvo. Semhedzisiro yemutemo wezvemari urikuitwa muEuropean Union uye izvo zvakatungamira kumutengo wemari uri zero, ndiko kuti, pa0%.
Nezve kubatsirwa mumari, iwe unogona zvakare kuwana yakatarwa uye yakavimbiswa mibairo. Uyu muenzaniso unogadzirwa ne mari inovimbiswa yekudyara. Iyo inopa kufarira iyo inogona kusvika kusvika ku5%, zvichienderana neiyo portfolio iyo zvigadzirwa zvemari izvi zvinoumba. Kusvika padanho rekutarisirwa semumwe wemhando dzekudyara dzinoshanda kwazvo kuenzanisa njodzi pamwe nekuita purofiti. Uye zvechokwadi nemhedzisiro yepamusoro pane izvo zvinopihwa nematemu etemu. Nemisiyano inosvika kumana muzana muzana mapoinzi.
Kunyanyisa kusagadzikana mumisika
Iko kusakosha kukuru kwekumisikidzwa mumisika yezvemari munguva dzino ndiko kushomeka kwakanyanya uko kunogadzirwa nenzvimbo dzavo. Ehezve, yakakwira kupfuura makumi mashoma emakore apfuura uye nekudaro havana kutambura kukwirwa kwakakura kudaro pakati pemitengo yavo yakakwira uye shoma. Kune rimwe divi, izvi zvinoita kuti zvisakwanise kuti iwe uve nemikana yakakwana yekuchengetedza nzvimbo dzako kubva zvino zvichienda mberi. Nenjodzi zhinji dzisiri kuitika mune ese mashandiro aunovandudza, kunyanya ayo akagadzirirwa kwenguva pfupi, kwausingakwanise kuchengetedza kuchengetedza kwako zvinobudirira.
Chete mukushanda kwemukati kana yakagadzirwa musi iwoyo unogona kuwana zvibereko zvirinani. Asi sekureba iwe uine ruzivo mune urwu rudzi rweakasarudzika mashandiro anoda ruzivo rwakadzika rwemisika yemari. Kuburikidza nemabasa anozivikanwa sekutengesa uye anoenda pamusoro pechiitiko icho kuchengetedzwa kwakasarudzwa kana midziyo yemari iri kupfuura. Kana iyi isiri yako, zvichave zvirinani kusiya iyo muyedzo sezvo iwe uchikwanisa kusiya maeuro mazhinji munzira. Uye nekudaro, hazvibatsiri iwe kuita akadaro maitiro maitiro.
Imwe yekiyi dzekudyara budiriro inoenderana nekubatanidza chishuwo chekuwana kudzoka pamwe nekuchengetedza nzvimbo. Pasina iwe uchitarisa kune zvinoshamisa zvinoshamisa, sezvakaitika mune mamwe makore apo maitiro mumisika yequity yaigutsa. Nekuti kubva ikozvino zvibodzwa zvako zvinofanirwa kuve zvine mwero zvakanyanya kupfuura nakare kose. Gara kure nekudzoka pane zvakapetwa kaviri manhamba, kunze kwekunge iwe uchida kuwedzerwa njodzi. Uye havazi vese vatengesi vanogona kutora chirevo ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iwe unofanira kuisa mari riini pamusika wemari?